तेस्रो लिंगी काे हुन्, समस्याको निवारण छ ? « Sansar News -->
तेस्रो लिंगी काे हुन्, समस्याको निवारण छ ?
(यो Sex organ बन्ने र बनाउने प्रक्रियामा कुनै त्रुटि भएमा, या राम्रोसंग बनेको हर्मोनले त्यो बनिराखेको गुप्ताङ्ग काम नगरेमा यो समस्या (Disorder of sex development) हुन जान्छ ।
संसारभरिनै पाइने ‘तेस्रो लिंगी हाम्रो मुलुकमा पनि छन् जो साधारण मानिसहरु भन्दा अलि फरक हुन्छन। समाजमा उनीहरुको पहिचान छुट्टै छ तर हाम्रो समाजमा अहिले पनि धेरै जसोले उनीहरुलाइ नराम्रो रुपले हेर्ने, देखेपछि तरकिने, अपहेलित गर्ने चलन अझै छ । १००० देखि २००० जन्मिने बच्चाहरु मध्ये एकजनामा देखिने यो समस्या नेपालमा लाखौं संख्यामा छन् भनेर विभिन्न मिडिया बाट थाहा पाइएको छ । धेरै जसो मानिसहरुमा जहिले पनि मनमा जिज्ञासा आइराखेको हुन्छ । को हो उनीहरु, किन हुन्छ यस्तो, केही उपचार गर्न सकिन्छ कि आदि ईत्यादि ।
यो भनेको के हो ?
मेडिकल भाषामा Disorder of Sex Differentiation (DSD) भनिने यो समस्यालाइ सरल भाषामा भन्दा केटा हो कि केटी भनेर लिङ्ग छुट्याउन गार्हो हुनेलाई नै तेस्रोलिंगी भनेर चिनिन्छ ।
यो किन हुन्छ ?
(यो एउटा जन्मजात् समस्या हो जुनमा जेनेटिक र हर्मोनहरुको रोल हुन्छ। हामी मान्छेहरु जब आमाको गर्भबाट यो संसारमा आउँछौ, त्यो बेला कि त केटाको रुपमा आउँछौ कि त केटीको रुपमा आउँछौ । केटा र केटी भनेर छुट्टाउने मा जेनेटिकको रोल छ । यहाँ सेक्स् क्रोमोजोमको कुरा आउँछ जसमा केटाको क्रोमोजोम 46XY र केटीको क्रोमोजोम 46XX हुन्छ। यो क्रोमोजोम बनेपछि केटा र केटीमा हुने sex organs (अण्डकोष र testes अथवा अण्डा/ovary) हरु बन्न सुरु गर्छ । 46XX क्रोमोजोम भएकोमा अण्डा र ovary बन्छ अथवा केटी हुन्छ ।
त्यस्तैगरी 46XY क्रोमोजोम भएकोमा अण्डकोष/testes बन्छ अथवा केटा हुन्छ । (यो जनेन्द्रीय अंग समयसंग विभिन्न हर्मोनहरुको सहयोगले क्रमीक विकास हुदै केटा र केटी भनेर छुट्टिने गुप्ताङ्गहरु लिङ्ग या योनी बन्न थाल्छ । एउटा क्रोमोजोम देखी लिएर गुप्ताङ्ग बन्ने प्रक्रिया सबैमा शरीर भित्र बन्ने थुप्रै हर्मोनहरुको हात हुन्छ।
यो समस्याको लक्षण के हो ?
जब कुनै बच्चा जन्मिन्छ, आमा–बुवा–परिवार–छरछिमेक सबै जनाहरुलाई एउटै चिन्ता हुन्छ, छोरा भयो कि छोरी भनेर । सबैको पहिलो हेराइ नै गुप्ताङ्ग तिर जान्छ। यस्तो बेलामा यदि (गुप्ताङ्ग हेर्दा न त छोरा को जस्तो देखिन्छ न त छोरीको जस्तो देखिन्छ ।
लिङ्ग केटाको जस्तो रुप भाको तर एकदम सानो, केटा मान्छेमा हुने पिसाव फेर्ने प्वाल लिङ्गको टुप्पोमा नभएर लिङ्गको तल्लो भाग मा हुने (Hypospadias), लिङ्ग धेरै नै बाँगो देखिने, अण्डकोष आफ्नो नर्मल् स्थानमा (Scrotum) नहुने ।
केटीको जस्तो गुप्ताङ्ग देखिने तर योनिको प्वाल र मुत्रनलीको प्वाल नर्मल नहुने
केटीको जस्तो गुप्ताङ्ग पनि भएको तर केटाको जस्तो लिङ्ग पनि देखिने (Cliteromegaly)
सानो उमेरमा शारिरीक विकास सामान्य देखेता पनि, Puberty (11-15 yrs) वश्यक अवस्थामा केटा वा केटीको शरिरमा आउने परिर्वतन जस्तै, जनेन्द्रीय अंगमा रौं को विकास नहुने, केटामा जुँगा नआउने, केटीमा स्तनको विकास नहुने हुन्छ ।
केटी भनेर हुर्कायो तर पछि महिनावारी सुरु हुनुपर्ने उमेर हुँदा पनि महिनावारी नभएमा पनि यो रोगको बारेमा शंका गर्नुपर्छ ।
सानो उमेरमा केही पनि थाहा नभएको र पछि ठूलो हुँदै जादा केटा भनेर हुर्काएको बच्चाले केटीको जस्तो बानी–व्यहोरा देखाउने
धेरै लाज मान्ने, Make-up गर्न रुचाउने, केटी साथी धेरै बनाउने र खेल्न रुचाउने, केटीको लुगा लगाउने आदि) ।
त्यसैगरी छोरी र केटी भनेर हुर्काएको बच्चाले केटाको जस्तो बानी–व्यहोरा देखाउने (केटाको जस्तो dress-up, कपालको style, केटाहरु हिँडेको जस्तो हिँड्ने आदि) गर्ने ।
के केटा र केटीको जनेन्द्रीय अंग एउटै शरीरमा हुनसक्छ ?
अवस्य हुनसक्छ । एउटा शरीरभित्र अण्डकोष पनि हुने र अण्डा पनि हुन सक्छ । एकातिर अण्डकोष हुने अर्कोतिर अण्डाशय हुनसक्छ, त्यसैगरी सबैतिर अण्डकोष र अण्डाशय संगसंगै जोडेर बसेको पनि हुनसक्छ। यस्तो समस्यालाई Ovotesticular syndrome भनिन्छ ।
यो समस्याको निवारण के छ ?
यस्तो समस्याहरुको लक्षण फेलापरेमा माथि उल्लेखित परिक्षण गर्ने र संगसंगै हर्मोनको जाँच गर्नपर्छ। हर्मोनहरुको गड्बड् भएमा हर्मोन सप्प्लीमेन्ट् दिनपर्छ । कुनैकुनै बेला अप्रेशन पनि गर्नपर्ने हुनसक्छ ।
के यस्तो समस्याहरु सानो उमेरमा उपचार गर्यो भने ठिक हुनसक्छ अथवा पछि पुरुष या महिला भएर समाजमा चिनाउन सम्भव छ ?
अवश्य सम्भव छ । जेनेटिकली पुरुष 46XY छ, तर बाहिरी गुप्ताङ्गहरु केटीको जस्तो छ भने हर्मोन दिएर र अप्रेशन गर्यो भने साधारण पुरुषको जस्तो लिङ्गको बनोट बनाउन सकिन्छ ।
त्यसैगरी, जेनेटिकली केटी 46XX हो भने गुप्ताङ्गहरुको अप्रेशन गरेर नर्मल जस्तो गुप्ताङ्ग र योनि बनाउन सकिन्छ । त्यसैगरी बच्चा बेलामा केटी हिसाबले हुर्किसकेको तर पछि ठुलो भएपछि केटाको जस्तो लक्षणहरु देखेमा बिरामी र बिरामीको लिगल गार्जेन संग सल्लाह गरेर बिरामीलाई के बन्न मन लागेको छ त्यही अनुसार बनाउन सकिन्छ ।
तर एउटा कुरा ध्यानमा राख्नुपर्छ, सबै कुरा मान्छेको हातमा हुँदैन । केटालाई केटी बनाउन सकिन्छ तर उसलाई आमा हुन गर्भधाराण बनाउन सकिदैन किनकि केटाको शरीरमा पाठेघर नहुने र केटी मान्छेमा हुने हर्मोन केटामा हुँदैन र भएमा थोरै मात्रामा हुने गर्छ, जुन धेरै मात्रामा भयो भने अरु नै समस्या आउन सक्छ ।
उपचारको क्रममा के के समस्याहरु आउनसक्छ ?
यो समस्या आफैमा नै निकै जटील छ र यसको उपाचार पनि निकै जटील छ । नभएको अङ्ग वा सानो भएको अङ्गलाई ठुलो बनाउने प्रक्रिया जटील छ। केटी मान्छेको योनिमार्ग या योनि बनाउने एक उदाहरण हो । अप्रेशन पनि एकैचोटिमा नै सबै ठिक हुनसक्छ भन्ने छैन । Stage अपरेसन (२–३ वटा) गर्नपर्ने हुनसक्छ र लामो समय सम्म फलोअपमा बसिराख्न पर्छ । कहिले काँही उपचार अवधि धेरै लामो हुनसक्छ ।
सानो उमेरमा उपचार नगरी ठुलो उमेरमा गर्दा केही फरक पर्छ ?
धेरै फरक पर्छ । बच्चाको सेल्फ् रेस्पेक्ट (Self-respect), मोटिभेसोन (Motivation) मा फरक आउन्छ । केटी भनेर हुर्किसकेको पछि केटा रहेछ या केटा भनेर हुर्किसकेको पछि केटी रहेछ भनेर थाहा भयो भने यो सामााजमा बस्न, दैनिक काम गर्न गार्हो हुनसक्छ। पठ्नबाट बन्चित, रिक्रियटिभ एक्टिभिटिज जस्तै खेलकुद, म्यूजिक आदिबाट बन्चित, सोशियल
एक्टिभिटिजबाट बन्चित हुनेगर्छ। बिरामीमात्रलाइ असर नपरेर परिवारलाई असर पर्छ। बसिराखेको गाउँ/शहर छोडेर बसाई सर्न परेको पनि देखिन्छ । सानो बेलामा नै समस्याको पहिचान गरेर लिङ्ग छुट्याएर समाजमा अघि बढ्न सजिलो हुन्छ।
(अप्रेशनको कुरा गर्ने हो भने कुनै पनि अप्रेशन सानो र साजिलो हुँदैन । कुनै अप्रेशन सानो उमेरमा गर्नपर्ने हुनसक्छ भने कुनै ठुलो उमेरमा गर्नपर्ने हुन्छ ।
Mixed-gonadal Dysgenesis भन्ने समस्या हो भने भविष्यमा अण्डकोषको क्यान्सरर अण्डाको क्यान्सर Mixed-gonadal Dysgenesis पनि हुनसक्छ ।